Oge n'etiti etiti, ndụ ndụ nke Sira Quiroga | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Oge n'etiti etiti (2009) bu akwukwo nke onye ode akwukwo Spanish María Dueñas. Ọ bụ akụkọ a haziri nke ọma banyere ndụ dị egwu nke Sira Quiroga, onye na-eto eto na-akwa ákwà nke hapụrụ Madrid ọnwa ole na ole tupu Agha Obodo. Ka ọ dị ugbu a, maka onye na-agụ ya, ụzọ onye edemede ahụ si kọwaa akụkọ dị egwu na Spain na Europe na-ekpughe.
N'ihi nke a, akwụkwọ a nwere ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha dị ka ihe akaebe nke oge ahụ (ewezuga agụụ ọ na-ezipụ). N'ozuzu, atụmatụ nke ịhụnanya na ihe mgbu, yana nkọwa nke eziokwu nke oge ahụ site na usoro ọgaranya na-atọ ụtọ, na-eme ya otu n’ime ọrụ kacha dị ịtụnanya e dere n’asụsụ Spanish nke puku afọ iri ọhụrụ.
1 Nchịkọta nke oge n'etiti Seams
1.2 Mbilite n'ọnwụ
2 Nyocha na oge n'etiti etiti
2.1 A ezigbo ezigbo akụkọ ihe mere eme akwụkwọ akụkọ
2.2 Isiokwu dị mkpa na akwụkwọ ọgụgụ
2.3 Mmegharị telivishọn
2.3.1 Mmalite nke aha?
3 Banyere onye edemede, María Dueñas
3.1 Mmetụta nke Oge N'etiti Seams
3.2 Akwụkwọ ndị ọzọ nke María Dueñas
Na nchikota nke Oge n'etiti etiti
Sira Quiroga bụ onye na-eto eto ma maa mma nke natara ihe nketa dị mkpa site na nna ya, bụ́ onye ji nkwusi ike na-atụ aro ịgbapụ Spain. Ndị 30s gafere, n'ehihie nke Agha Obodo, Sira nwere ike ịnwe ime ihe ike na gburugburu ebe obibi. Ọzọkwa, nwa agbọghọ ahụ dara nzuzu n'anya Ramiro, n'agbanyeghị na o kpebiri ịkwaga n'isi obodo Morocco.
Maka ihe ndị a kpọtụrụ aha, Nwatakịrị nwanyị ahụ na-aga Tangier na-agbaso ụzọ nke onye ọ hụrụ n'anya. Agbanyeghị, ngụkọta oge ha apụtaghị prevarication, aghụghọ na ajọ ihe n'akụkụ nke Ramiro. N'ihi ya, Sira hụrụ onwe ya ka a gbahapụrụ ya na Northwest Africa ma nwoke a jọgburu onwe ya zuru ohi (yana ụgwọ).
Sira na-achịkwa iji merie n'agbanyeghị ọnọdụ ọjọọ ahụ; O kpebiri ịmaliteghachi ahia ya dị ka onye na-akwa akwa iji dịrị ndụ, ọbụnakwa nwee ịhụnanya ọzọ. N'ụzọ dị otú ahụ, ọ ọ na-emeta ọtụtụ ndị ahịa enyi… Enyi ohuru a metutara ndoro ndoro ochichi n’etiti onodu agha dika ihe di uku kpughere mgbanwe nke ihe.
Mgbe e mesịrị, Sira Quiroga kpebie ije ozi dị ka onye nledo maka ndị agha jikọrọ aka ma sonye n'ụzọ dị ịrịba ama na ihe omume nke Agha IIwa nke Abụọ. Agbanyeghị na ngwụcha akụkọ ahụ, o doro anya na onye ọhụụ ahụ chọrọ naanị ibi n'udo, ọgba aghara na-echere ya ebe ọ na-aga. Otú ọ dị, a kọwara ihe ndị a Sira, akụkụ nke abụọ nke Oge n'etiti etiti (wepụtara na Eprel 2021).
Nyocha na Oge n'etiti etiti
A ezigbo ezigbo akụkọ ihe mere eme akwụkwọ akụkọ
N'akwụkwọ a, onye edemede na-atụle nnukwu ochicho akwukwo, nke gaghi ekwe omume iguta ya dika akwukwo akuko mere eme. N'ihi ya, ntinye nke ezigbo mmadụ na ihe mere na 30s na Spain dị mkpa maka akụkọ ahụ.
Na mgbakwunye na nke a - site na ahụmịhe nke protagonist—, Dueñas ji amamihe were kọwaa ihe kpatara Agha Worldwa nke Abụọ. Iji mee nke a, onye edemede ahụ na-eji nkọwa na amaokwu na-egosi ọhụụ ya banyere agha kachasị mkpa na akụkọ ihe mere eme nke ihe a kpọrọ mmadụ. Ebe ebumnuche bụ ka ọdachi nke agha ghara ịdị na-echeta onye na-agụ ya.
Isiokwu dị mkpa na akwụkwọ ọgụgụ
O doro anya na, mgbe ị na-eche akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, ọ gaghị ekwe omume ịghara inye ezigbo mkpa maka gburugburu ebe a na-akọ akụkọ ihe mere eme. Ya mere, Oge n'etiti etiti na-eme ka onye na-agụ ya soro ndụ nke Sira Quiroga, mgbe ọ na-egosi ọhụụ nke agha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, isiokwu agha na ọnọdụ mmadụ na-agafe akụkọ ahụ dum.
Ọzọkwa, onye bụ isi - n'okpuru aha koodu Arish Agoriuq - ghọrọ ụzọ dị mkpa nke nledo Bekee n'oge Agha Worldwa nke Abụọ. Ke ukem, A na-ekpughe usoro ihe mgbagwoju anya nke agha ahụ na-agabiga oke ọdachi a na-apụghị izere ezere. Na mgbakwunye, ịbịaru agha obodo Spanish na-akọwa etu mmekọrịta mmadụ na ibe ya si bụrụ n'ihi ọgba aghara ahụ.
Nnabata nke ọha na eze gbakwunyere nnukwu nnwale nyocha mere ka Oge n'etiti etiti e wetara na obere enyo. N'ihi nke a, Na 2013, Antena 3 telivishọn depụtara usoro nke otu aha nwere oge 17 ruo ugbu a. ma nwee ọtụtụ onyinye.
Ọzọkwa, Usoro a nwere ihe nkiri mba ụwa nke ndị na-eme ihe nkiri nke Adriana Ugarte duziri, Peter Víves na Hanna New, n'etiti ndị ọzọ. Ihe omume ọ bụla nke usoro a chọrọ ihe mmefu ego nke ọkara nde euro, ọ bụ n'ihi ntọala oge na ejiji.
Mmalite nke aha?
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụla ego ejiri nke ọma, ebe ọkwa ọkwa nke oge mbụ agbadataghị n'okpuru 11%. Gụnyere, ihe omume nke iri na otu, "Laghachi ụnyaahụ", hụrụ ihe dị ka nde mmadụ 5,5 (27,8% gee ntị na Jenụwarị 20, 2014).
N'ikpeazụ, na igba egbe nke Sira (2021) María Dueñas emeghewo ụzọ maka ịnyefe ndị ọzọ Sira Quiroga na-agụ - Arish Agoriuq. N'iburu ewu ewu na nọmba azụmaahịa enwetara na obere enyo, ndị na-asụ Spanish ga-eju anya ma ọ bụrụ na usoro ọhụụ nke usoro a apụta.
Banyere onye edemede, María Dueñas
Ọ bụ onye nkụzi Spanish na onye edemede a mụrụ na 1964, na Puertollano, Ciudad Real, Spain. Tupu ịmalite ọrụ edemede gị, Ndi nwe ya Ọ mere ndụ agụmakwụkwọ na nkuzi maka ihe karịrị afọ iri abụọ na Mahadum Murcia. N'otu aka ahụ, nwanyị Puerto Rican nwere doctorate na Bekee Philology ma nwee nnukwu ọrụ omenaala na nyocha emere na mba Iberia.
Ugbu a, María Dueñas bi na Cartagena, lụrụ otu prọfesọ mahadum ma nwee ụmụ abụọ. Ke ukem, gosipụtara ọrụ ọgụgụ isi nke bịara na mbipụta nke akwụkwọ mbụ ya na 2009: Oge n'etiti etiti. N'ihi nke a, ọ ghọrọ ihe ama ama na Europe na akụkụ nke ụwa ndị ọzọ.
Mmetụta nke Oge n'etiti etiti
Akwụkwọ ọgụgụ a Ọ ghọrọ akwụkwọ kachasị mma, sụgharịrị gaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ asụsụ iri anọ wee gbanwee usoro telivishọn site na ọwa Antena 3. N'otu ụzọ ahụ, ekele maka aha a Dueñas natara ọtụtụ ihe ndozi. N'ime ha, Obodo nke Cartagena Nrite maka Akwụkwọ Akụkọ Ọhụrụ (2010) na Nrite Nrite 2011 (edemede edemede) nke Obodo Madrid.
Mgbe afọ iri na abụọ bipụtara, Oge n'etiti etiti na-enweta ihe karịrị nde ahịa ahịa mba ise. Mana, dịka a ga - asị na nke a ezughi, ebipụtala akwụkwọ akụkọ a opekata mpe ugboro iri asaa na Europe niile na ebe ndị ọzọ n’ụwa.
Akwụkwọ ndị ọzọ nke María Dueñas
Ndị a ma ama Oge n'etiti etiti jiri onye edemede nke Spanish jiri kwalite mbipụta ya ndị ọzọ ọ ga-ede. Ọzọ, n’enweghị mgbagha, Echefu Mision (2012), Ọnwụ (2015) na Ughtersmụ nwanyị Captain (2018)Ha nwere amara ha nwere ma rụọ ọrụ nke ọma. N'ezie, Echefu Mision y Ọnwụ e megharịala ha ka ha were televishọn.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Oge n'etiti etiti
Akwụkwọ akụkọ masịrị m nke ukwuu!
Daalụ maka ọmarịcha nchịkọta na nyocha!